Coors Light ဘီယာကုမ္ပဏီကနေ ဘီယာဘူးတွေ လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ အသက် ၉၃ နှစ် အရွယ်အဘွားအို။ – SoShwe
Home/Other/Funny/Coors Light ဘီယာကုမ္ပဏီကနေ ဘီယာဘူးတွေ လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ အသက် ၉၃ နှစ် အရွယ်အဘွားအို။
Coors Light ဘီယာကုမ္ပဏီကနေ ဘီယာဘူးတွေ လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ အသက် ၉၃ နှစ် အရွယ်အဘွားအို။
So Shwe May 21, 2020	Funny, LifeStyle Leaveacomment
အသက် ၉၃ နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘွားအိုကို ဘီယာကုမ္ပဏီက ဘီယာဘူးတွေ လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားရတဲ့အချိန်မှာ လူတွေက အံ့ဩသွားကြမှာပဲနော်။ အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ်အဘွားအိုကို ဘာကြောင့်များ ဘီယာကုမ္ပဏီက ဘီယာဘူးတွေလက်ဆောင်ပေးတာလဲ ? အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ် အဘွားအိုက ဘီယာသောက်တာဟာ သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေဘူးလား ? စတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ မေးတဲ့လူတွေအများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တကယ်မှာတော့ Pennsylvania ဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၉၃ နှှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘွားအို Olive Veronesi က “I Need More Beer” လို့ ကတ်ထူစက္ကူပေါ်မှာရေးထားတာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး လူသုံးများတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာဟာ နေ့တွင်းညတွင်းချင်းမှာပဲ မျှဝေသူ အများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်။
အခြားသော အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဟာ ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ ဝါးမြိုခြင်းကို မခံရလေအောင် ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ရင်း ဘုရားတရားလုပ်ရင်း အိမ်တွင်းမှာ နေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ ဘွားဘွား Veronesi က ဘီယာလေးသောက်ရင်း ကျန်ရှိသေးတဲ့ ဘဝကြီးကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ Coors Light ဘီယာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက အဘွားအိုအတွက် ဘီယာ ၆ ဘူးတွဲ ၁၀ ကဒ်ကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘီယာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက အဘွားအိုအတွက် ဘီယာဘူးတွေ လာပို့ပေးတဲ့အခါမှာတော့ ဘွားဘွား Veronesi က “ငါခုချိန်ထိ ဘောလုံးကန်နိုင်သေးတယ်။” ဆိုပြီး သူဟာကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေဆဲဆိုတာကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Coors Light ဘီယာကုမ္ပဏီက ဘီယာတွေပို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ အဘွားအိုက “Got More Beer” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ကတ်ထူစက္ကူပေါ်မှာရေးပြီး တစ်ခါကြွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ အဘွားအိုက လက်ဆောင်ရတဲ့ ဘီယာကဒ်တွေ စီထားတဲ့ဘေးမှာမှီရင်း ဘီယာကိုအရသာခံပြီး သောက်နေပါတယ်။
အခုလိုမျိုး မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကို ကြားနေရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာ အချိန်မျိုးမှာ အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ အဘွားအို Olive Veronesi ကတော့ သူ့ရဲ့ကျန်ရှိသေးတဲ့ ဘဝကို အခုလိုမျိုး အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနေတာ မြင်ရတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်း ကျန်ရှိသေးတဲ့အချိန်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် တောင်းဆုပြုပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Coors Light ဘီယာကုမၸဏီကေန ဘီယာဘူးေတြ လက္ေဆာင္ရခဲ့တဲ့ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ အရြယ္အဘြားအို။
အသက္ ၉၃ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ အဘြားအိုကို ဘီယာကုမၸဏီက ဘီယာဘူးေတြ လက္ေဆာင္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို ၾကားရတဲ့အခ်ိန္မွာ လူေတြက အံ့ဩသြားၾကမွာပဲေနာ္။ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္အဘြားအိုကို ဘာေၾကာင့္မ်ား ဘီယာကုမၸဏီက ဘီယာဘူးေတြလက္ေဆာင္ေပးတာလဲ ? အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအိုက ဘီယာေသာက္တာဟာ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစဘူးလား ? စတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြ ေမးတဲ့လူေတြအမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။
အမွန္တကယ္မွာေတာ့ Pennsylvania ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၉၃ ႏွွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ အဘြားအို Olive Veronesi က “I Need More Beer” လို႔ ကတ္ထူစကၠဴေပၚမွာေရးထားတာကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး လူသံုးမ်ားတဲ့ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Facebook ေပၚမွာ တင္ခဲ့တာဟာ ေန႔တြင္းညတြင္းခ်င္းမွာပဲ မွ်ေဝသူ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။
အျခားေသာ အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြဟာ ေရာဂါဆိုးႀကီးရဲ႕ ဝါးၿမိဳျခင္းကို မခံရေလေအာင္ က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ရင္း ဘုရားတရားလုပ္ရင္း အိမ္တြင္းမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘြားဘြား Veronesi က ဘီယာေလးေသာက္ရင္း က်န္ရွိေသးတဲ့ ဘဝႀကီးကို အေကာင္းဆံုးျဖတ္သန္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ပဲ Coors Light ဘီယာထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အဘြားအိုအတြက္ ဘီယာ ၆ ဘူးတြဲ ၁၀ ကဒ္ကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘီယာထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အဘြားအိုအတြက္ ဘီယာဘူးေတြ လာပို႔ေပးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘြားဘြား Veronesi က “ငါခုခ်ိန္ထိ ေဘာလံုးကန္ႏိုင္ေသးတယ္။” ဆိုၿပီး သူဟာက်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေနဆဲဆိုတာကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
Coors Light ဘီယာကုမၸဏီက ဘီယာေတြပို႔ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အဘြားအိုက “Got More Beer” ဆိုတဲ့ စာသားေလးကို ကတ္ထူစကၠဴေပၚမွာေရးၿပီး တစ္ခါႂကြားခဲ့ပါေသးတယ္။ ဓါတ္ပံုေတြထဲမွာ ျမင္ရတဲ့အတိုင္းပဲ အဘြားအိုက လက္ေဆာင္ရတဲ့ ဘီယာကဒ္ေတြ စီထားတဲ့ေဘးမွာမွီရင္း ဘီယာကိုအရသာခံၿပီး ေသာက္ေနပါတယ္။
အခုလိုမ်ိဳး မေကာင္းတဲ့သတင္းေတြကို ၾကားေနရတဲ့ စိတ္ညစ္စရာ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အသက္ႀကီးေနၿပီျဖစ္တဲ့ အဘြားအို Olive Veronesi ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕က်န္ရွိေသးတဲ့ ဘဝကို အခုလိုမ်ိဳး အေကာင္းဆံုးျဖတ္သန္းေနတာ ျမင္ရေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကိုလည္း က်န္ရွိေသးတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆုျပဳေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Source ~ PEOPLE
Previous အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတိုင်း COVID – 19 ကာလအတွင်း လေ့လာထားသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်။
Next COVID-19 အချိန်မှာ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေအနေနဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ Dylan Maharani လို့ခေါ်တဲ့ (၆) နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးဟာ စပါးအုံမြွေကြီးတွေနဲ့ အခြားအန္တရာယ်များတဲ့ တွားသွားသတ္တဝါတွေနဲ့ အတူနေထိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတဲ့ ကလေးငယ်လေးဟာ …